I-GPS037D -I-GPS yokuLwa eLahlekileyo iTracker Pendant yeAutism / Autistic yaBantwana / yeZidingo zaBantwana eziKhethekileyo-iZisombululo ze-OMG
Iqhosha eliPhambili lePanic, iKhamera yokuGcina uMzimba, i-GPS Tracker kunye neBhedi yokuPhuma ePalam Alarm, Ukubonelela ngokubonelela ngeKhamera
Ikhamera yomzimba-Imveliso yeVidiyo yoNgeniso
1. Inkxaso ye-4G / 3G / 2G Inethiwekhi: Isiginali yomeleleyo, ikhava ebanzi yenethiwekhi, isantya senethiwekhi ngokukhawuleza.
2. IP67 engamanziIsixhobo sobungqina bamanzi singasetyenziswa phantsi kwamanzi.
3. Isibane esi-SmartInokucinywa okanye isebenze ngokuzenzekelayo ngokukhanya okukuyo.
4. Ixesha lokulandelela iGPS: Fumana izithandwa zakho nangaliphi na ixesha naphi na, zikhusele ngalo lonke ixesha.
5. Imodeli ye-GPS + ye-WIFI + ye-LBS yokuBeka iziXhobo ezininzi: isixhobo sinokuqonda ngokuzenzekelayo inethiwekhi yokubeka kwaye sitshintshe imo yokubeka ngokuzenzekelayo, ngaphakathi ngaphakathi usebenzisa imo yokubeka i-LBS ngelixa ngaphandle imo yokubeka i-GPS. Ukulandela umkhondo wexesha lokwenyani kunye nedatha yokuma kwedatha yokulayisha ngokuzenzekelayo
6. Umgudu Wembali weNdlela (irekhodi lokuhamba ezinyaweni): indlela yokuhamba yomsebenzisi we-GPS kwiinyanga ze-3 zakutshanje ziya kurekhodwa ukukhangela kwikamva, ukuze ukwazi ukulandelela zonke iindawo umnikazi weGPS ebezikhona, kulula ukufumana ezilahlekileyo.
7. I-Alarm Fence Alarm (ifowuni ye-Geo-ucingo: unokuseta indawo ekhuselekileyo (umsebenzisi weGPS njengeziko) ukubagcina (njengabantwana bakho, abadala, abakhubazekileyo) ngaphakathi kwendawo, xa umnini weGPS ephume kwindawo ekhuselekileyo, isixhobo siza kuphakamisa i-alam ngokuzenzekelayo isicelo sefowuni yakho.
8. Ialarm yebhetri ephantsi: xa umkhondo we-GPS uphelelwe ngamandla ebhetri, i-alamu yebhetri esezantsi iya kuthunyelwa kwisicelo kunye nenombolo yokubeka esweni.
9. Ukumamela kude: ngeli nqaku, unokumamela isixhobo ngasese ngaphandle kokuviwa.
10. Inqaku loMnxeba: Ungasisebenzisa esi sixhobo ukulandela umkhondo kunye nokukhusela izilwanyana zakho zasekhaya, kwaye umnxeba kwakhona ukuba ukude ukude ngokusebenzisa umnxeba wokufowuna.
Umbala Mnyama, Golide, Mhlophe
iqhosha Iqhosha elinye (iqhosha lamandla)
I-GPS antenna I-antenna ephakamileyo yokuvakaliswa kwe-ceramic
I-antenna ye GSM FPC
Slot khadi slot I slot enye
womnatha Uhlobo A:
Iimpawu zeGPS L1,1575.42MHz C / A khowudi
Iziteshi zeGPS Iifayile ze20
GPS Ukubeka ngokuchanekileyo 5 ~ 15m
Indawo yokumisa isiseko sokuchaneka 100-1000M
Okumisiweyo okwangoku <0.5 mA
Umlinganiselo wokubekwa okwangoku <2.5 mA
Umyinge wokusebenza okwangoku <55mA
iqondo lobushushu -20 ~ 70 ℃
ukufuma I-5% ukuya ku-95% ayikho impazamo
iziQinisekiso CE, ROHS, FCC kunye njl
I-GPS antenna Ubunzulu obuphakamileyo obukwakhelwe ngaphakathi kwi-FPC
I-antenna ye GSM I-antenna ye-PIFA eneeyure ezine
OS inkxaso I-Android 2.3 nangaphezulu, iOS 5.0 nangaphezulu
8040 Ubutyebi Bonke Imibukiso ye-2 Namhlanje